Shalay waaqaca ayaa diiddanaa ONLF, oo Itoobiya ayeynu ku heshiinnay….W/Q Maxamed Xaaji – somalilandtoday.com
Shalay waaqaca ayaa diiddanaa ONLF, oo Itoobiya ayeynu ku heshiinnay….W/Q Maxamed Xaaji
Shalay waaqaca ayaa diiddanaa ONLF, oo Itoobiya ayeynu ku heshiinnay 1993, 1997, 2002, 2005 & 2012 amni ku wada noolaanshiyaha mandiqiga ah iyo in aan labada dhinac midna aannu cadow gobbood u noqon. Waana sida ONLF loo ga dhiibi jiray Jabuuti, Soomaaliya, Somaliland iyo Kiiniya.
Maantana waaqaca ayaa oggol oo la heshiiyey ONLF oo aynaan markii horeba cadow ahayn. Waxa isku keen diray ayaa ahaa dan siyaasadeed, haddana waxa Qalbi-Dhagax Hargeysa keenay ayaa ah dan kale oo si
Qolooyinka maankoodu baal marsan yahay danta siyaasiga ahi sida ay yeesho ayaa qariibsada afcaasha isdiidan ee gedgeddoonka siyaasadda danlayda ah ku timaadda.
Sida uu Qalbi-Dhagax ugu soo dhiiraday in uu yimaaddo Hargeysa oo shalay dhaqdhqaaqiisa ka soo horjeedday ayey Somaliland na u ga qajili wayday waxay hore u diidday in ay hadda doonto! Ficillada siyaasadda ee danlayda ah nimaan fahmin ayaa yaab u yaal!
Jabuuti ayaa heshiiska Eritrea baryootamaysa, waayo Itoobiya ayaa la heshiisay Eritrea! Maraykan ayaa Eritrea u diirnaxaya, waayo dantiisa ayaa fartay! Sucuudiga ayaa Somaliland taariikhda markii ugu horraysay qaabilay oo raba in uu soo dhaweysto, waayo dan uu leeyahay ayaa seetaysay! Waa sidaa siyaasaddu ee yaan la gu dayow asqoobin isbedbeddelkeeda caashaqa.